Axmed Madoobe iyo Ergayga UN-ka oo is-afgarad ka gaarey doorashada
By Madaxtooyada Jubbaland , GAROWE ONLINE
KISMAAYO, Jubbaland - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Aqalka Martida ee Magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo xubno kale oo ka socday Hay'adaha Qaramada Midoobay.
Kulankan oo lagaga hadlay qodobo kala duwan ayaa marka uu soo dhamaaday Waxaa Saxaafada la hadlay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo Danjiraha Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in kulanka lagaga hadlay guud ahaan Siyaasada Soomaaliya halka ay marayso iyo si gaar ah Arimaha Doorashooyinka Jubbaland Madaxweynahu wuxuu sheegay in ay isku raaceen in waxa wadanka lagu kala hagi karo uu yahay dastuurka dalka u yaala oo lagu dhaqmo mar uu ka hadlayay arimaha doorashooyinkana wuxuu sheegay in la isku raacay in Arimahaas looga danbaynayo guddiga doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka.
Madaxweynahu wuxuu intaas ku daray in goobta ay ka dhacayso doorashada iyo amnigeedaba la isku raacay in ay tahay masuuliyad u taala Jubbaland.
Danjiraha Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa ka mahad celiyay sida loo soo dhaweeyay waxaana uu Jubbaland uga Tacsiyeeyay weerarkii Argagixisonimo ee lagu qaaday Hotel Madiina waxaa Safiirku uu sheegay in Qaramada Midoobay ay garab taagan tahay Dowlada iyo shacabka Jubbaland oo xanuunka ay la qabsanayso.
Waxaa kale oo danjirahu uu sheegay in kulanka isaga iyo Madaxweynaha lagaga hadlay kobcinta dhaqaalaha iyo Dowlad wanaaga arimahaasna ay Qaramada Midoobay ka tageerayso Jubbaland.
Waxaa uu intaas ku daray in ay doonayaan in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo aan meela laga faragalin isla markana masuuliyadeeda ay leedahay Dowlad Goboleedka Jubbaland wuxuu xusay in uu sidoo kale uu la kulmay gudiga doorashooyinka Jubbaland iyo Xildhibaanada laga soo doorto Jubbaland ee Baarlamaanka Federaalka ah oo uu aragtidooda ka dhagaystay.
Axmed Madoobe oo hoos u dhigay dalabyo uga yimid Beesha Caalamka
Soomaliya 15.08.2019. 13:56
Ergayga Qaramada Midoobay oo maanta gaarey magaaladda Kismaayo ayaa si diiran loosoo dhaweeyay.
Beesha Caalamka oo fariin u dirtay Guddiga Doorashadda Jubbaland
Soomaliya 18.08.2019. 00:01
James Swan oo la siiyey amar ku aadan khilaafka DF iyo maamuladda
Soomaliya 26.11.2019. 11:11
Qaramada Midoobay oo fahfaahin ka bixisay kulankii Shariif iyo Swan
Soomaliya 05.12.2019. 20:01
Jubbaland: Xildhibaan Xasaanadda laga qaaday [Akhri Sababta]
Soomaliya 29.01.2018. 16:40
Soomaaliya: Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka Kismaayo
Soomaliya 16.12.2017. 13:42